जनताको अपेक्षा धेरै छ, समस्याहरु धेरै छन्--प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेकराज पन्थी
अन्तरवार्ता 133 पटक पढिएको टी.वी.विरही थापा क्रान्तिद्वार दैनिक
गरुडालाई नमूना नगरपालिका बनाउने योजना छ– अधिकृत टेकराज पन्थीवर्तमान समयका लागी पत्रकार टी.वी.विरही थापाले गरूडा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग नगरको विकास गतिविधि तथा आगामी नीति, कार्यक्रमका बिषयमा गर्नु भएको कुराकानीको संपादित अंश ।
तपाई गरुडा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा आफ्नो क्षमता मेहनत लगाइरहनुभएको छ । नगरपालिकालाई राम्रो बनाउन के के काम गरिरहरनु भएको छ ?
मैले यहाँ आएर काम गरेको १ वर्ष पूरा भएको छ यसबीचमा मैले यहाँको विकासनिर्माणको कामलाई सूचारु गर्न धेरै पहल गरेर सहजीकरणका साथ अगाडि बढाईरहेको छु । देखिने खालका काम थुप्रै भएका छन् । विगत वर्षहरुमा गिटी, बालुवा, ढुंगा, माटो, छर्नेकाम मात्र हुन्थ्यो भने यसपटकको बजेटमा मैले ८० प्रतिशत पक्की काम हुनै पर्ने गरी बजेट विनियोजन गरी काम गराइरहेको छु । विकासनिर्माणका काम मध्ये विषेश गरेर सडक निर्माणको कामलाई बढी जोड दिएको छु । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छु । सबै स्वास्थ्य चौकीमा औषधीको कमी हुन नदिन बजेट विनियोजन गरेको छु । रौतहटको मध्ये क्षेत्रमा अवस्थित यो गरुडा बजार भित्र सडकमा परेका मापदण्ड विपरीत बनाएका घरहरु भत्काएका छौं । त्यहाँ फुटपाथ निर्माण गर्ने, साईडमा बिरुवा रोप्ने र सोलार प्यानल राखेर बजारलाई आकर्षक बनाउने गरी ठेक्का लगाएर काम सुरु गरीसकेका छौं । अबको पाँच महिना भित्र यो काम सम्पन्न हुनेछ । त्यसैगरी प्रत्येक वडामा ढलान गरेर पक्की सडक निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । गरुडा नगरपालिकामा प्रवेशद्धारमा स्वागतद्धार निर्माण गरेका छौं । त्यसैगरी ऐन, कानून, कार्यविधि अनुसार कार्यालयका काम अगाडी बढाउनका लागि लक्षित क्षेत्रको कार्यक्रम अगाडी बढाएका छौं । पत्रकारिताको विकासका लागि असल पत्रकारहरुलाई सम्मान र पुरस्कित गर्ने कार्य आउँदो वर्षबाट सुरु गर्नका लागि नगरसभाबाट पास गरीसकेका छौं । सरकारको विकास बजेट कम खर्च भैरहेको बेला हामीले विकासलाई तिव्र पारेका छौं । विकास निर्माणको काम गर्दा अनुगमन गर्नका लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिती बनाएका छौं । त्यसले अनुगमन गरेपछि निर्माण र गुणस्तरको रिपोर्ट दिएपछि मात्र त्यो आयोजनालाई हामीले भुक्तानी दिने गरेका छौं । यसरी सबै कामलाई व्यवस्थित रुपले सिस्टममा हालेर नगरका कामहरु अगाडि बढाएका छौं । विकास निर्माणका काम गरीरहेका छौं ।
तपाई यहाँ आएपछि सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो आएको स्थानीयले बताएका छन् । यसलाई अझ राम्रो बनाउन चुनौति चाँहिँ के के छन ?
पहिलो कुरा त यहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि उहाँहरुले जनतालाई विभिन्न खालका आश्वासन दिनुभएको हुनसक्छ । यो गरिदिउला त्यो गरिदिउला यति मिटर पाइप दिउला यति जनालाई रोजगारी दिउला भन्नुभएको हुनसक्छ तर हामीले कानूनलाई टेकेर काम गर्नुपर्छ । कानूनले नलिने कुरा हचुवाको भरमा गर्न मिल्दैन यो कुरा उहाँहरुलाई थाहा नहुन सक्छ । यसर्थ उहाँहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । दोस्रो हाम्रो आफ्नै भवन छैन बजारको घरमा भाडा लिएर काम गरिरहेका छौं । तसर्थ आफ्नै भवनका लागि स्रोत साधन जुटाउनु छ । बजारको माग धेरै छ, प्राथमिकता धेरै छन् तर बजेट सीमित छ । सीमित स्रोत साधनले धेरै माग पूरा गर्नुपर्नेछ । बाढी सितलहर आगलागि हुँदा त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारलाई आगो निभाउने दमकल मागेका थियौं त्यो पनि प्राप्त भएको छैन । यस्ता समस्याले सताउनुका साथै गरुडाबासीलाई प्रधानमन्त्रीको सुखी समृद्धि अभियान पूरा गर्ने गरी कानून र योजना तर्जुमा गर्न पर्नेछ । सीमित स्रोत साधनले नगरबासीका अनेक चाहना पूरा गर्ने कुराले हामीलाई सताईरहेको छ । अर्को यी सबै काम पूरा गर्न हामीलाई कर्मचारीको अभाव छ ।, अहिले हामी भैरहेका कर्मचारी संघमा समायोजन भैसकेका छौं । यहाँ कर्मचारी छैनन् । हामीले भर्ना गर्न मिल्दैन जनतालाई सेवा सुविधा छिटो दिनुपर्नेछ तर त्यस अनुसारको कर्मचारी नहुँदा समस्या भैरहेको छ । स्थायी प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । अस्थायी प्राविधिक कर्मचारीले काम चलाइरहेका छौं । यस्तो कर्मचारीबाट हुने काम क्वालिटि मेनटेन गर्न गाह्रो भैरहेको छ । यस्तै थुप्रै चुनौतीहरु छन् जसलाई पूरा नगरी नगरको काम अगाडि बढाउन समस्या छ ।
यी सबै काम गर्न स्रोत साधन कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ त ?
नेपाल सरकारले निस्थित बजेट दिन्छ । त्यहि दिएको बजेटलाई व्यवस्थित गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । हामीले फजुल खर्च कटौती गरेका छौं । केन्द्रिय अनुदानबाट प्राप्त भएको बजेटलाई विकासमा मात्र लगाएका छौं । राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त भएको बजेटले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउँछौं । आन्तरिक स्रोतले मात्रै जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता खुवाउने काम हामीले गरेका छौं । भएको स्रोतलाई नै व्यवस्थापन गरेर सबैलाइृ समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । यसबाट न्यूनतम आवश्यकताहरु पूर्ति गर्दै पनि छौं ।
अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले हामी जनताबाट चुनिएका हामीले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने र कर्मचारीले हामी पढेर कानून बुझेर आएका छौं । जे पायो त्यही गर्न दिदैनौं भन्ने कुराले अन्र्तद्धन्द्ध सिर्जना भएको छ, तपाईलाई त्यस्तो समस्या छ कि छैन ?
त्यस्तो समस्या २ नम्वर प्रदेशका धेरै ठाउँमा छ भन्ने सुनेको छु तर मेरो नगरपालिकामा त्यस्तो छैन । किनकी जनप्रतिनिधिलाई तालिम दियो बुझायो ऐन, कानूनले यस्तो गर्न मिल्छ यस्तो गर्न मिल्दैन भन्यो भने यस्तो समस्या आउँदैन । जनप्रतिनिधिको उद्देश्य पनि नगरको विकास नै हो । उनीहरुलाई नहुने कुरा यसरी हुँदैन भनेर बुझाएपछि उहाँहरुले बुझ्।नुहुन्छ मैले त्यसैगरी सहज रुपले काम गरीरहेको छु । म आउनु अघि यहाँ पनि बैठक भत्ता खाने चलन रहेछ तर मैले राज्यको कानूनले भत्ता खाँदा बेरुजु आउँछ भनेर भनेपछि उहाँहरुले त्यसोभए नखाने भन्नुभयो । त्यसैगरी जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेको राख्न खोज्ने हुन्छ तर यो ऐनले यो नियमले राख्न मिल्दैन कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रशासकीय अधिकृतको हो नीति बनाउने काम जनप्रतिनिधिको हो भनेर बुझाउदा उहाँहरुले सहज लिएको अवस्था छ । मेरोमा तपाईले भनेको समस्या छैन । मैले चलाएको वृन्दावन नगरपालिकामा जनपंतिनिधिले विना ऐन कानून पच्चीस लाख आफ्नो तसजविजले खर्च गर्न खोज्दा मैले रोकिदिएको छु । प्रशासक सक्षम भयो भने त्यस्ता समस्या आउदैनन् ।
जनताले यहाँ बढि के खोज्छन् ?
जनताको अपेक्षा धेरै छ, समस्याहरु धेरै छन् । रोजगारीका समस्या छिटो छरितो सेवा प्रवाह स्वास्थ्य उपचार शिक्षाका समस्याहरु छन् । यसैगरी यहाँ विकृति पनि छन् । बजारमा अखाद्य गुणस्तरहिन वस्तुहरु धेरै छन् । त्यसलाई विक्री वितरण गर्न नदिएर हामीले नष्ट गरेका छौं । यसमा डाबर कम्पनीको टुथब्रस र रियल जुस समातेर कारवाही गरीसकेका छौं । उपभोक्ता ऐन २०७५ अनुसार अनुगमन गर्ने कारबाही गर्ने गरिरहेका छौं । विना स्वीकृति अस्पताल सञ्चालन गर्ने औषधी प्रेसक्राइभ गर्ने ओम अस्पताललाई कारबाही गरेर अस्पताल नै बन्द गरेका छौं । साथसाथै जनताले छिटो सेवा डेलिभरि खोजेका छन त्यसका लागि कर्मचारी र बजेटको अभाव छ ।
यस्तो मधेसी जनताको बाहुल्य भएको ठाउँमा भाषाको समस्या भएको ठाउँमा सीमित स्रोत साधनले धेरै सेवा सुविधा दिनुपर्नेछ चुनौतीका चाङमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ सन्तुष्टि असन्तुष्टि के छ ?
जहाँ गएर काम गरेपनि नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँमा गएर कानूनको परिधि भित्र रहेर काम गर्ने हो, कानून कार्यान्वयन गर्ने हो, सरकारले लाय अह्राएको काम गर्नुपर्ने हो त्यो मैले इमान्दारीताका साथ गरीरहेको छु । मलाई तीन वटा नगरपालिका सम्मको जिम्मेवारी दिएको थियो ती कामहरु मैले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरीरहेको छु । यसको उच्च मूल्यांकन सरकारले गर्नेछ भन्ने अपेक्षाका साथ मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राती १० बजेसम्म खटेर गरेको छु । आशा छ भोलिका दिनमा मेरो मूल्यांकन भएर राम्रो काम गर्ने ठाउँमा आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा सरुवा होला भन्ने ठानेको छु । मैले ऐन कानूनको राम्ररी पालना र कार्यान्वयन गरेर काम गरीरहेको छु । ऐन कानून नाघेर कसैलाई काम गर्न दिएको छैन । यसले मलाई सन्तुष्टि मिलेको छ । जनप्रनिधिलाई पनि रुझाएको छु । नगरवासिलाई पनि रुझाएको छु भन्ने लागेको छ । ऐन कानूनको कार्यान्वयन गर्दा जनप्रनिधिले पनि बुझ्नुभएको छ । कानून विपरीत काम गर्न खोज्ने वृन्दाबन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई कानून विपरीत काम हुन नदिएर राज्यको २५ लाख रुपैया दुरुपय हुनबाट रोकेको छु । त्इसले पनि मलाई सन्तुष्टि दिलाएको छ । सिष्टममा काम गर्दा ऐन कानूनको परिधिभित्र रहेर काम गर्दा कुनै समस्या हुँदैन यो मेरो अभियानमा आमसञ्चारकर्मी जनप्रनिधिले सहयोग गरेको खण्डमा यो नगरपालिकालाई नमूना नगरपालिका बनाउन सक्छु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
1485757	Times Visited.